Ciidamada DKMG ah oo deegaano horleh oo ka tirsan Duleedka Muqdisho – SBC
Ciidamada DKMG ah oo deegaano horleh oo ka tirsan Duleedka Muqdisho
Ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo isgarabsanaya ayaa waxay la wareegeen deegaano horleh oo ku yaala Duleedka Muqdishoi.
Deegaanada Duleedka bari ee magaalada Muqdisho ayaay ku soo siqayaan ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom iyagoona gacanta ku dhigay deegaanka Keydsaley iyo Galgalata, goobahaasi oo horay ay ugu sugnaanjireen xarakada mujaahidiinta Alshabaab.
Dagaal kooban oo halkasi ku dhexmaray labada dhinac waa ciidamada DKMG ah iyo xarakada Alshabaabe waxaa la xaqiijiyay in ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom ay la wareegeen deegaanad hoos yimaada Keydsaley .
C/kariin Yuusuf Aadan Dhagabadan waa abaanduulaha ciidamada DKMG ah ayaa goobtaasi kula hadlay warbaahinta isagoonna sheegay in Alshabaab goobihii ay faarujiyeen islamarkaana ay ciidamadu ku suganyihiin gacankugeyntana ay la wareegeen.
Dhanka kale ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay Sheegashada Ciidamada DKMG ah ee ah in ay la wareegeen Galgalato, Sh Cali Cabdule iyo weliba Keydsaley, marka laga reebo saraakiil ka tirsan xarakada oo sheegay in iska caabin xoogleh ay la kulmeen ciidamada Amisom.
SBC Internatoinal Muqdisho